Warehouse Supervisor | Job in Myanmar ﻿
24.8.2020, Full time , Design / Decoration
• မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
• တိကျမှန်ကန်သော စာရင်းများကို အထက်အရာရှိအား တင်ပြနိုင်ရမည်။
• Computer Excel နှင့် စာစီစာရိုက် အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• စာရင်းဇယားများကို တိကျမှန်ကန်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ပြီး စာရင်းပိုင်း ပိုင်နိုင်သူရမည်။
• ပစ္စည်းအဝင်အထွက်စာရင်း၊ ပစ္စည်းအလေအလွှင့်မဖြစ်အောင် ပစ္စည်းထားသိုမှုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။
• ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခန်း ရုံးခန်း ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။
Work location Mingalar Street,Sanchaung Township,Yangon.
638 Days, Full time , Design / Decoration
670 Days, Full time , Design / Decoration
671 Days, Full time , Design / Decoration
Warehouse Supervisor Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Design Communications International Co, Ltd. Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Design/Decoration Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Shan State 519 Days
Magway Region 542 Days